IGLTA inyula uSihlalo wokuqala waseColombia kwiBhodi yaBalawuli
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » LGBTQ » IGLTA inyula uSihlalo wokuqala waseColombia kwiBhodi yaBalawuli
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Amalungelo abantu • LGBTQ • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Iindaba zeWired Travel
UFelipe Cárdenas, uMsunguli kunye ne-CEO ye-Colombian LGBT Chamber of Commerce (CCLGBTCO) ngowokuqala waseColombia ukuba abambe indima yebhodi ephezulu kwi-LGBTQ + yoMbutho wezohambo.
UFelipe Cárdenas, uMseki weQela kunye ne-CEO ye-Colombian LGBT Chamber of Commerce (CCLGBTCO), wabizwa njengoSihlalo we-IGLTA.
Unyulo lubonisa iinzame ze-IGLTA zokubandakanya amalungu amancinci kumbutho wama-38 wehlabathi wokhenketho.
UFelipe Cárdenas wajoyina ibhodi ye-IGLTA ngo-Matshi 2017 kwaye ngaphambili wayesebenza njengoNondyebo.
Ibhodi yabalawuli ye-LGBTQ yamazwe aphesheya + yabalawuli kutsha nje inyule amagosa abo ama-2021-2022. UFelipe Cárdenas, uMsunguli we-Co-CEO kunye neCGombian LGBT Chamber of Commerce (CCLGBTCO), wabizwa njengoSihlalo, emenza owokuqala waseColombia ukuba abambe indima yebhodi ephezulu ye-IGLTA. Ukwangowokuqala weminyaka eliwaka ukukhokela ibhodi yomanyano, ukubonakalisa iinzame ze-IGLTA zokubandakanya amalungu amancinci kumbutho wezokhenketho wehlabathi oneminyaka engama-38.
“Ukuba nguSihlalo weBhodi yabaLawuli be-IGLTA, njengombutho ophambili wokuqhubela phambili uhambo lwe-LGBTQ, lilungelo lokwenene kum. Ndiziva ndiqinisekile ukuba sizakuqhubela phambili kumzi-mveliso wohambo olungileyo nolubandakanya wonke umntu, ”utshilo uCárdenas, ojoyine ibhodi kaMatshi 2017 nowayefudula esebenza njengoNondyebo.
“NjengoLatino, kunye nomlandeli wokuqala waseColombia nowokuqala ukuba nguSihlalo, bonke IGLTA Usapho unokuqiniseka ukuba uzinikele ngokupheleleyo ekujoyineni uJohn Tanzella, uMongameli / iGosa lethu eliyiNtloko, kunye neqela le-IGLTA kunye ne-IGLTA ukuguqula umbutho wethu wehlabathi ukubonisa ukuba zeziphi iindwendwe ezahlukeneyo ekufuneka zihambe ngokukhuselekileyo kwaye zihlala zibuyela kuzo zonke iindawo ezamkelekileyo kunye namashishini ezokhenketho esisebenza nawo. ”
I-Cárdenas izakujoyina iqela elilawulayo lebhodi nguSekela Sihlalo uShiho Ikeuchi, Umphathi Jikelele wehotele iSorano eTokyo, eJapan; UNobhala uRichard Krieger, uMlawuli weeholide zaseSky; kunye noNondyebo uPatrick Pickens, uMlawuli wee-MICE kwi-Delta Air Lines. UJon Muñoz, iGosa eliyiNtloko le-DEI eBooz Allen Hamilton, uya kubamba isikhundla sokuba nguSihlalo odlulileyo.
The I-LGBTQ yamanye amazwe + Umbutho wokuHamba yinkokeli yehlabathi ekuqhubeleni phambili uhambo lwe-LGBTQ + kunye neLungu eliDibeneyo leLungu loMbutho wezoKhenketho weZizwe eziManyeneyo. IGLTAUmnqophiso kukubonelela ngolwazi kunye nezixhobo kubahambi be-LGBTQ + kunye nokwandisa i-LGBTQ + kwezokhenketho kwihlabathi jikelele ngokubonisa ifuthe lazo kwezentlalo nezoqoqosho. Ubulungu be-IGLTA kubandakanya i-LGBTQ + kunye ne-LGBTQ + indawo yokuhlala eyamkelekileyo, iindawo ekuyiwa kuzo, ababoneleli ngeenkonzo, iiarhente zokuhamba, abaqhubi bezokhenketho, iminyhadala kunye nemithombo yeendaba yokuhamba kumazwe angama-80. I-philanthropic IGLTA Foundation ixhobisa i-LGBTQ + yamkela amashishini okuhamba kwihlabathi liphela ngobunkokheli, uphando kunye nemfundo.